2 killed — News of The World
कुमारी बैंकको नाफा ४३ प्रतिशतले वृद्धि
करको बबन्डरः माछा मार्ने जाल पनि दर्ता गर्नुपर्ने
गाउँपालिकाको उद्यम अभियान, एक घर एक टनेल
मिडिया चलाउदै कर्णाली सरकार
घर नहुनेलाई घर दिदैं सरकार, यी हुन् घर पाउने मापदण्ड
विपन्नलाई आवास सुविधा दिईने
भैसी बेच्दा १ हजार कर तिनुपर्ने
३१ साउन, काठमाडौँ । तपाई साईकल चढ्नु हुन्छ ? त्यसबापत कर लाग्नेछ । खोलामा डुंगा चढेर वरिपरि गर्नपर्छ ? त्यसबापत नि कर लाग्नेछ । माछा मारेर जिन्दगी चलाउनुुहुन्छ ? त्यसका...
३१ साउन, काठमाडौँ । सबै गाउँलेलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्वत्को महाशिला गाउँपालिकाले एक घर उक टनेल कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गाँउपालिकाले बजेट छुट्यएर कम्तीमा ५० प्रतिशत घर धुरीमा व्यवासयिक तरकारी...
३१ साउन, काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन ररेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन् निर्माण...
३१ साउन, काठमाडौँ । तपाई साईकल चढ्नु हुन्छ ? त्यसबापत कर लाग्नेछ । खोलामा डुंगा चढेर वरिपरि गर्नपर्छ ? त्यसबापत...
जीवित भएको प्रमाण लिन पनि कर तिर्नुपर्ने
कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नाफा ४३ प्रतिशत बढाएको छ...
३१ साउन, काठमाडौँ । तपाई साईकल चढ्नु हुन्छ ? त्यसबापत...
३१ साउन, काठमाडौँ । सबै गाउँलेलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्वत्को महाशिला...
३१ साउन, काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको...
३१ साउन, काठमाडौं । आवासविहिन विपन्न नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने...
कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नाफा ४३ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७४\_०७५ मा १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ७०...
३१ साउन, काठमाडौं । आवासविहिन विपन्न नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ । संविधानको मौलिक हकमा रहेको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुने’ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक...